Fil d'actualités du 26/06/2019
26/06/2019 - 19:30 : ZAVA-DOZA: Miisa 17 hatreto no maty vokatry ny fifanosehana hijery "podium" tao Mahamasina ny takariva teo, raha ny vaovao vonjimaika.
Archive du 20180827
Marc Ravalomanana “Ny Malagasy aloha !”
Isika Malagasy ihany no masimandidy amin'ny fiainam-pirenentsika. Aza diso safidy, ary aza voatarika sy sodokan'ny miseho ho mamiratra nefa tsy mitondra soa, hoy i Marc Ravalomanana tamin’ny vahoaka maro be tetsy Mahamasina ny sabotsy 25 aogositra teo.
Fizotry ny fifidianana Mpandrindra sy mpandamina ihany ny CENI
Toy ny milaza an-kolaka avy hatrany ny filohan’ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana, Yves Herinirina Rakotomanana, ny sabotsy teo tetsy
Jean Omer Beriziky “Mila fitoniana ny fifidianana”
Tsotra sady mazava ny an`ny kandidà Jean Omer Beriziky, mitondra ny laharana faha-19 ao amin`ny biletà tokana. Vonona ny tenany hitari-dalana ny Malagasy amin`ny fanovana sy fanarenana ny firenena amin`izao krizy misy eto amintsika izao.
Bileta tokana Raikitra ny filalaovana tarehimarika
Fantatra ny sabotsy teo ny filaharan’ireo kandida ho filoham-pirenena miisa 36 ao anaty bileta tokana.
Kandida 36 Tsy misy olana matoa navela hilatsaka, hoy ny Maitso
Nanambara tamin’ny fomba ofisialy ny fipetraky ny antoko Maitso manoloana ny fiavian’ny fifidianana ho filoham-pirenena tamin’ny faran’ny herinandro teo ity antoko politika ity.
Aleo ny lasa homba ny lasa Tsy hamaly faty ny mpitandro ny filaminana Ravalo
Tsotra ny resaka ataoko amin’ny mpitandro ny filaminana Miaramila, Zandary, Polisy.
Imbeh Serge Jovial « Hamaha ny olana sy geja misy eto aho »
Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy lasa teo, taorian'ny antsapaka izay nataon'ny CENI ny laharana izay entin'ireo kandidà ho filoham-pirenena tsirairay avy. Mitondra ny Laharana" faha-26"
Hetsika Faha-15 taonan’ny TIM Mahamasina Naneho ny heviny ireo mpomba an’i Dada
Taorian’ny hetsiky ny TIM niaraka tamin’i Dada tetsy Mahamasina tamin’ny sabotsy 25 aogositra teo dia manana ny heviny tamin’iny hetsika iny ireo mpomba azy.
Toby FLM Farihimena Nahazo 4 tapitrisa ariary avy amin’ny filoham-pirenena
Fotoam-pivavahana lehibe ny namaranana ny isan-taona faha-72 ho an’ny toby Loterana Farihimena any akaikin’i Betafo, izay nanomboka tamin’ny herin’ny anio ary nifarana omaly 26 aogositra.
Coupe de Vacances 2018 Any Mahajanga indray mihaona
Nifarana omaly alahady 26 aogositra 2018 ny fifaninanana baolina kitra niadiana ny amboara « Coupe de Vacances 2018 » nokarakarain’ny klioba 3FA teny amin’ny kianjan’ny kaominina Ankadikely Ilafy ny 20-26 aogositra 2018 ka nanasongadinana indrindra ny talentan’ireo katitakely sy tanora.
Volley-ball Asief 2018 Raikitra indray ny fiadiana ny amboara
Taorian’ireo lalao famaranana tenisy notontosaina tamin’ny heriny teny amin’ny kianja filalaovana tenisy eny Ankatso ka natrehan’ny filohan’ny Antenimirandoholona ka nahafantarana an’ireo
Ralley du Boeny 2018 Norombahin’i Tahina sy Baovola
Norombahin’ny ekipazy Tahina sy Baovola Cl.M12 nitondra ny Subaru Impreza n°5 ny Rallye du Boeny 2018 izay andiany faha-13 amin’ny fifaninanana nokarakarain’ny TMF Rallye.
Telma Coupe de Madagascar CNaPS Sport sy Elgeco Plus no tafavoaka tany Mahajanga
Tontosa ny sabotsy 25 sy omaly alahady 26 aogositra ireo lalao ¼-dalana amin’ny Telma Coupe de Madagascar notontosaina tany Mahajanga.
Amboaran’ny Ben’ny tanàna Nomena marim-pakasitrahana koa ireo nahavita be
Ankoatra ny fanolorana an’ireo amboara maro natolotry ny ben’ny tanàn’Iarivo, Lalao Ravalomanana,
Zimbazimbao eo foana e !
Mivoaka iny ny laharan’ny kandida ao anaty biletà tokana amin’ny fifidianana. Samy manana ny ambarany sy ny fandikany sy ny fandokadokafana io laharany io ny kandida.
Antananarivo Renivohitra Tsy hiasa mandritra ny 3 andro ny taksibe
Tsy sangisangy, hoy ny filohan’ny fivondronan’ireo mpitatitra eto Antananarivo Renivohitra (UCTU) Atoa Lova Randrianatoandro ny fitokonan’ny taksibe mandritra ny telo andro fa tena hisy.
Hopitaly miaramila eny Ampahibe Mampiasa fitaovana avo lenta
Notokanana ny sabotsy teo tetsy Ampahibe ny hopitaly miaramila faritra voalohany na ny Infirmerie de Garnison teo aloha. Ny filoham-pirenena,
Aretin’ny vanin-taolana 1,6 tapitrisa Ar no saran’ny fandidiana
Aretina mahazo ny olona maro eto amintsika ny aretin’ny vanin-taolana mpahazo ny valahana sy ny lohalika. Mahatratra 200 isan-taona eo ho eo ireo olona tonga manatona tobim-pitsaboana, raha araka ny fantatra saingy ny 30 amin’ireo ihany no afaka mitsabo tena mandalo fandidiana.
Mozika « Rock » Nampireven’i Mage 4 Antsahamanitra
Nafana tanteraka ny ambiansy ho an’ny tarika Mage 4 sy ny mpankafy tetsy Antsahamanitra omaly.
Ady amin’ny asan-dahalo any Bongolava Tafapetraka ny “Bataillon Inter-Armes” na BIA
Tafapetraka any amin’ny kaominina Fihaonana any amin’ny Distrikan’i Tsiroanomandidy, Faritra Bongolava ny Vondron-tobin-tafika Iraisam-piadiana na ny “Bataillon Inter-Armes” na BIA, ka ity no faharoa taorian’ny any Ihosy, Faritra Ihorombe.
Sady voatora-bato ireo olon’ny HVM izay namory vahoak ataoFianarantsoa no voasiotsioka. Voamafy in-droa arak’izany ary dis otanteraka ny kajikajy rehetra dia ny fanaovana propagandy mialoha ny fotoa na izany ary koa ny fampiasàna ny mpiasam-panjakana.
Masoivohon’i Vietnam miasa eto Madagasikara Hijery akaiky ireo tanora sy zokiolona taranaka Vietnamiana
Hijery akaiky ireo tanora sy zokiolona taranaka Vietnamiana eto amintsika ny masoivohon’ity firenena iray ity vaovao Atoa Le Huy Hoang.
Antsirabe Misesisesy ny hain-trano
Sesilany ny hain-trano ao Antsirabe renivohitra ao. Vao tapa-bolana lasa izay dia nitrangana hain-trano goavana tao Mahazoarivo Avaratra ka nahamaizana tranobe iray nisy fianakaviana valo tonta.
Sehatra fizahantany Hampanankarena haingana an’i Madagasikara
Efa nampanankarena firenena maro ny toekarena mifototra amin’ny fizahantany.
Firenena mpanafatra lamba Mitodi-doha aty amin’i Madagasikara
Taorian’ny fahapotehana nohon’ny fanonganam-panjakana nisy tamin’ny taona 2009 dia efa manomboka miverina tsikelikely ireo orinasa mamokatra lamba (textile) eto Madagsikara.